mashiinka alxanka mashiinka alxanka-saaraha sare
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Sare / RF PVC mashiinka alxanka loogu talagalay alxanka balaastigga, iwm.
Welding Sare oo Sare, oo loo yaqaan 'Frequency Radio' (RF) ama alxanka Dielectric, waa habka isku darsamida walxaha iyadoo la adeegsanayo tamarta hirarka raadiyaha aagga lagu biirinayo. Weld ka soo baxa waxay noqon kartaa mid xoogan sida qalabka asalka ah. Alxanka HF wuxuu ku tiirsan yahay sifooyinka qaarkood ee walxaha la alxaminayo si ay u dhaliyaan jiilka kuleylka ee koronto si xawli leh u beddeleysa. Tan macnaheedu waxa weeye in kaliya walxaha qaarkood lagu dhejin karo iyadoo la adeegsanayo farsamadan. Nidaamku wuxuu ku lug leeyahay hoos-u-dhigista qaybaha in lagu soo daro jaangooyooyin sarreeya (inta badan 27.12MHz) aagga elektromagnetic, oo sida caadiga ah lagu dabaqo inta u dhexeysa laba baararka birta ah. Baararkaani waxay sidoo kale u dhaqmaan sida cadaadis baarayaal inta lagu jiro kuleylka iyo qaboojinta. Aagga korantada firfircoon wuxuu keenaa molikuyuullada kuleylka cirifka inay oscillate. Waxay kuxirantahay joomatari ahaan iyo daqiiqad-diimeed, mootoolajiyadan ayaa u tarjumi kara qaar ka mid ah dhaqdhaqaaqan oscillatory-ka tamarta kuleylka waxayna sababi karaan kululeynta maaddada. Qiyaasta isdhexgalkaani waa qodobka luminta, taas oo ah heerkulka iyo inta jeer ee ku tiirsan.
Polyvinylchloride (PVC) iyo polyurethanes ayaa ah kuwa ugu badan ee thermoplastics-ka lagu dhejiyo habka RF. Waa suurogal in RF alxamado polymer kale oo ay ka mid yihiin nylon, PET, PET-G, A-PET, EVA iyo resins qaar ka mid ah ABS, laakiin shuruudo gaar ah ayaa loo baahan yahay, tusaale nylon iyo PET waa la alxami karaa haddii baararka alxanka preheated loo isticmaalo marka lagu daro Awooda RF.
Alxanka HF guud ahaan kuma haboona PTFE, polycarbonate, polystyrene, polyetylen ama polypropylene. Si kastaba ha noqotee, xaddidaadaha soo socda ee ku saabsan isticmaalka PVC, darajo gaar ah oo polyolefin ah ayaa la soo saaray taas oo awood u leh in lagu dhejiyo HF.
Hawsha aasaasiga ah ee alxanka HF waa in la sameeyo isku-dhaf ah laba ama ka badan dhumucdiisuna tahay wax sheet. Tiro astaamo ikhtiyaari ah ayaa jira. Qalabka alxanka waa la xardhi karaa ama la shaacin karaa si loo siiyo dhammaan aagga alxanka leh muuqaal qurxin ama waxay ku dari kartaa farsamo wax lagu qoro oo lagu dhejiyo xarfaha, astaamaha ama saameynta qurxinta ee walxaha alxanka leh. Marka lagu daro daraf goyn ah oo ku dhegan dusha sare ee alxanka, geeddi-socodka ayaa isku mar alxammi kara oo gooyn kara walax. Xagga goynta ayaa isku dhejinaya balaastigga kulul oo ku filan si loogu oggolaado walxaha qashinka badan in la jeexjeexo, markaa hawshan waxaa badanaa loo yaqaannaa alxanka-shaabadda alxanka.
Alxanka caadiga ah ee alxanka ayaa ka kooban matoor soo noqnoqda oo sarreeya (kaasoo abuuraya inta jeer ee raadiyaha), saxafad sambabaha wadata, koronto koronto ku wareejisa inta jeer ee raadiyaha hadda ku jira walxaha la alxaminayo iyo kursiga alxanka ee walxaha ku haya meesha. Mashiinka ayaa sidoo kale yeelan kara bar dhulka lagu duubo oo inta badan lagu dhajiyo gadaasha korantada, taas oo keenta dhabarka hadda mashiinka (barta dhulka). Waxaa jira noocyo kala duwan oo alxanleyaal ah, kuwa ugu caansan waa mashiinnada tarpaulin, makiinadaha wax lagu duubo iyo mashiinno otomaatig ah.
Adoo hagaajinaya qalabka mashiinka, awooda garoonka ayaa lagu hagaajin karaa walxaha la alxamanayo. Marka alxamida, mashiinka waxaa ku wareegsan aag mawjadaha raadiyaha oo, haddii uu aad u xoog badan yahay, kululeynaya jirka xoogaa. Tani waa waxa loo baahan yahay in hawlwadeenku ka ilaaliyo. Awoodda mawjadaha raadiyaha raadiyaha waxay sidoo kale kuxirantahay nooca mashiinka la isticmaalo. Guud ahaan, mashiinada leh elektaroodyada furan ee furan (kuwa aan gaashaamaneyn) ayaa leh goobo ka awood badan mashiinada ay ku xiran yihiin koronto.
Markii la sharaxayo aagagga korantada elektromagnetic-ka, inta jeer ee aagga ayaa badanaa la sheegaa. Mawjadaha la oggol yahay ee walxaha caagga ah waa 13.56, 27.12, ama 40.68 megahertz (MHz). Warshadaha ugu caansan ee loogu talagalay alxanka HF waa 27.12MHz.
Meelaha inta jeer ee raadiyuhu ka soo baxo alxanka balaastigga ah wuxuu ku faafay hareeraha mashiinka, laakiin inta badan waxay kaliya ku xigtaa mashiinka oo aaggu aad u xoogan yahay oo taxaddarrada loo baahan yahay in la qaado. Awoodda garoonka ayaa si aad ah hoos ugu dhacaysa iyadoo laga fogeeyo isha. Aagga berrinka waxaa lagu bixiyaa laba cabir oo kala duwan: xoogga aagga korantada waxaa lagu cabiraa volt halkii mitir (V / m), iyo xoogga aagga birlabta waxaa lagu cabiraa amperes halkii mitir (A / m). Labadan arimoodba waa in la cabiraa si loo helo fikrad ah sida uu u xoogan yahay inta jeer ee raadiyaha. Xilliga adiga ku maraya haddii aad taabatid qalabka (la xiriir hadda) iyo kan hadda jirka dhex mara marka alxamida (ay sabab u tahay hadda) waa in sidoo kale la cabbiraa.
Faa'iidooyinka Farsamada Alxanka Joogtaynta Sare
Daweynta HF waxay ka dhacdaa gudaha gudaha iyadoo la adeegsanayo walxaha laftiisa sida ilo kuleyl. Kuleylku wuxuu diiradda saarayaa bartilmaameedka walxaha si markaa waxyaabaha ku hareeraysan aysan u baahnayn in si aad ah loo kululeeyo si ay u gaaraan heerkulka bartilmaameedka ee wadajirka.
Iyadoo Kululaynta HF waxaa la soo saaraa oo keliya marka berrinka ay tamar leedahay. Marka koronto-dhaliyuhu wareego, kuleylka ayaa daminaya. Tani waxay u oggolaaneysaa xakameyn weyn xaddiga tamarta ee maaddadu ku aragto wareegga oo dhan. Intaas waxaa sii dheer, kuleylka soo saaray HF kama soo baxayo dhinta sida kuleylka kulul. Tani waxay ka hortageysaa kuleylka-hoos u dhaca maaddada kuleylka leh.
Qalabaynta HF badanaa waa la qabowsiiyaa. Tani waxay ka dhigan tahay in markii HF la damiyo, maaddada ay joojiso kuleylka, laakiin waxay ku sii jirtaa cadaadis. Qaabkan waxaa suurtagal ah in labadaba isla markiiba la kululeeyo, la alxamo, lana qaboojiyo maaddada ku hoos jirta cadaadiska. Kontarool badan oo ku saabsan alxanka ayaa keenaya xakameyn dheeri ah natiijada ka soo baxda, sidaas darteedna kordhiya xoogga alxanka.
Waldayaasha RF waa “nadiif” maxaa yeelay waxa kaliya ee loo baahan yahay si loo soo saaro walxaha HF waa maaddada lafteeda. Ma jiraan wax koolo ama alaab ah oo ku lug leh HF
Categories Technologies Tags Xilliga sare, alxanka PVC sare, alxanka mawjadaha sare, alxanka badan ee alxanka, Isugeynta alxanka qulqulka badan, alaarmida badan ee alaarmiga, RF, Alxanka RF, Mashiinka alxanka RF, Caaga alxanka RF Post navigation